Madaxweyne Xasan Shiikh:"majiro Khilaaf nagala dhaxeeya Kenya"
Home Somali News Somali Government Madaxweyne Xasan Shiikh:”majiro Khilaaf nagala dhaxeeya Kenya”
Madaxweyne Xasan Shiikh:”majiro Khilaaf nagala dhaxeeya Kenya”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud, oo wareysi gaar ah siinayay idaacada BBC-da ayaa waxa uu dafiray inuu jiro khilaaf xoogan oo udhaxeeya doowladiisa iyo dowlada Kenya.
Mar madaxweynaha la weydiiyay su’aal ku saabsaneed sababihii keenay inuu baajiyo safarkii uu ku tagi lahaa dalka Kenya waxa uu ku jawaabay:”booqashadeyda Kenya wali way taagantahay dhowaana waan tagi doonaa, annaga iyo dowlada kenyana wax cilaaqaad xumo ama mugdi ah naguma dhexjiraan”.
Sidoo kale madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday arimaha kusaabsan maamul usamaynta Jubbooyinka, waxa uuna sheegay in doawlada Soomaaliya ay dowlad katahay iyadana ay leedahay go’aanka maamul usamayntooda, sidoo kale waxa uu sheegay in dowlada Kenya iyo urur goboleedka IGAD ay door iyo talo bixin oo kaliya ay ku oleeyihiin.
“Jubbooyinka dhulka Soomaaliyeed ayay kamidyihiin dowlada Soomaaliya ayaana leh go’aanka maamul usamayntooda, dowlada Kenya iyo IGAD-na door ayay ku leeyihiin oo ah ineey doowlada Soomaaliyeed u kaalmeeyaan sidii ay dalka maamulo ugu samayn lahayd, laakiin dalkaan waa dal xor ah waa dal madax banana, doowlad aan KMG ahayn oo rasmi ah ayaa kajirta kartideedana way muujisay wayna cadeysay, Kenyana waa dowlad dariskeena ah waxaan ku kala aragti duwanaana majirto” ayuu madaxweynaha yiri.
Hadalkan kasoo yeeray madaxweynaha ayaa imaanaya xili maalmihii ugu danbeeyba ay soo kordhayeen Khilaafka iyo mad madowga soo kala dhexgalay Kenya iyo Soomaaliya, taasoo salka ku haysa arimaha maamul usamaynta Jubbooyinka oo ay Kenya ay isa siisay ineey iyadu leedahay go’aanka maamul usamayna Jubooyinka.
Sidoo kale waxaa jirtay in safar qorsheesnaa oo uu madaxweyne Xasan Shiikh ku tagi lahaa Nairobii uu baaqday kadib markii safaarada Soomaalida lasoo gaarsiiyay warqadcadaynaysa in Kenya aysan diyaar u ahayn qaabilaada Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Madaxda Galmudug ayaa...